ဦးဝီရသူကို တစ်လအတွင်း တရားလာရောက် ရင်ဆိုင်ရန် ကြေညာချက် ထုတ် - Yangon Media Group
ဦးဝီရသူကို တစ်လအတွင်း တရားလာရောက် ရင်ဆိုင်ရန် ကြေညာချက် ထုတ်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၉
တိမ်းရှောင်နေသည့် ဦးဝီရသူကို တစ်လအတွင်း တရားလာရောက်ရင်ဆိုင်ရန် ကြေ ညာချက်ထုတ်ဆင့်လိုက်ကြောင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ သတင်း ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဒုတိယခရိုင် တရားသူကြီး ဦးမင်းသန့်က ပြော ကြားလိုက်သည်။
”တရားရုံးကနေ တရားရုံး လက်စွဲအပိုဒ် ၅၁၃၊ အပိုဒ်ခွဲ ၅ ပေါ့။ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ-၈၇ အရ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ အတွက် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆို တာထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီထုတ်ပြန် ကြေညာချက်ကို တစ်လအတွင်း တရားရုံးကို ပြန်တင်ပြဖို့ချိန်းထားတယ်” ဟု ၎င်းင်းက မီဒီယာများကို ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက် သည်။
ကြေညာချက်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ညွှန်ကြားပြီး သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းက ပြောသည်။ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၈၇ နှင့် ၈၈ အရ ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းက ပြောသည်။ ပုဒ်မ ၈၇ တွင် မည်သည့် တရား ရုံးမဆို မိမိဝရမ်းထုတ်ထားသူ တစ်ဦးသည် တိမ်းရှောင်သွားကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ဝရမ်းအတည်မပြုနိုင်စေရန် ပုန်းကွယ်နေကြောင်း ယုံကြည် ရန် အကြောင်းရှိလျှင် မိမိကြေညာသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်ထက် မနည်း သီးခြားဖော်ပြထားသော အချိန်နှင့် သီးခြားဖော်ပြထားသော နေရာတွင် ရောက်ရှိရမည်ဖြစ် ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင် ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို အဆိုပါလူနေထိုင်မြဲဖြစ်သည့် မြို့သို့မဟုတ် ကျေးရွာ၏ထင်ရှား သော နေရာတစ်ခုတွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်ကို အများကြားသိ အောင်ဖတ်ကြားရမည်။ အဆိုပါ လူနေထိုင်မြဲဖြစ်သည့်အိမ် သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ၏ထင်ရှား သော နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ မြို့ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ၏ထင်ရှား သော နေရာတွင်ဖြစ်စေ ယင်းထုတ် ပြန်ကြေညာချက်ကို ကပ်ထားရမည် ဟု ပြဋ္ဌာန်းချက်အရသိရသည်။ ပုဒ်မ ၈၈ မှာ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေသူပိုင်ပစ္စည်းကို ဝရမ်းကပ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲမှူးကြီးမျိုးသူစိုးက ”ပုဒ်မ ၈၇ ကတော့ လူဖမ်းဝရမ်းပေါ့။ ရှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သိသာအောင်လို့ တရားရုံးကနေ ဒီလူနေတဲ့နေရာ၊ ရပ်ကွက်တို့အိမ် တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တို့တရားရုံးတို့မှာ လိုက်ကပ်ပြီးတော့ အကြောင်းကြားတာပေါ့။ ရဲက ကပ်မယ်လို့သိရတယ်။ ဦးဝီရသူကို လာရှင်းခိုင်းတာပေါ့။ တရားရုံးကနေ အမိန့်ကြေညာစာ ထုတ်တာပေါ့”ဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေး၏မေးမြန်းမှုကို ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် ဖြေကြားသည်။ ကြေညာချက်ထုတ်ဆင့်မှုအ ပေါ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဦးဝီရသူ လာရောက်မရင်ဆိုင်ပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ တရားခံပြေးအဆင့် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းင်း က ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၉ ရက် ရုံးချိန်းတွင် ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ (၁) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်သိန်း၊ ရာအိမ်မှူး ဦးကျော်ကျော်သိန်း နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ (၂) ရပ်ကွက် ဆယ်အိမ်မှူး ဦးလှိုင်မျိုး ထွန်းတို့သုံးဦးကို တရားလိုပြသက် သေအဖြစ် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”သက်သေတွေအားလုံး ကုန် သွားပါပြီ” ဟု ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးမင်းသန့်က ပြောသည်။ အမှုတွင် တရားလိုသက်သေ ကိုးဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို အရေးယူ ပေးရန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းမင်းက တရားလိုပြုလုပ်ပြီး မေ ၂၈ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲကျော်ခန့်က အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄-က ဖြင့် ဦးတိုက်လျှောက်ထား တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေ ၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနှင့် ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဟောပြောပွဲတွင် ဆရာတော် ဦးဝီ ရသူ ဟောပြောချက်များမှာ အုပ်ချုပ် ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး ကဏ္ဍတို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မလေးစားအောင်၊ မေတ္တာပျက်အောင်၊ အကြည်ညိုပျက်စေသည့် ပြောကြား ချက်များပါသည်ဟုဆိုကာ တရားစွဲ ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ သတင်းပြန်ကြား ရေးအရာရှိ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးမင်းသန့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားထားသည်။
ရာသီကြို သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော နေမာနှင့် ပီအက်စ်ဂျီတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့
မုံရွာမြို့၌ ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် တရားမျှတမှု ရှာဖွေပေးရေး ဒေသခံပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆို
၂ဝ၂၅ ခုနှစ်တွင် ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော လူဦးရေငါးသန်း ပြည့် မီရေး မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နေဟု မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းဆို
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းအတွက် စီရော်နယ်ဒို နောင်တမရ
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်မည်ဆိုပါက ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင??
Facebook မှတစ်ဆင့် ကာမစိတ်ကြွဆေးဝါးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူကို အသွင်ယူဖမ်းဆီး
မန်စီးတီး လူငယ် ဒီယက်ဇ်ကို ပေါင် ၂၂ သန်းဖြင့် ရီးရဲလ် တရားဝင်ခေါ်ယူ ဆန်ချိုနှင့် ဒီယက်ဇ် တို??